के गरिन् त्यस्तो काजोलले ? शाहरुख खानका छोरा अब्रामले काजोललाई मन पराउँदैनन् – Classic Khabar
शाहरुख खान र काजोलको जोडीले रुपैयाँ पर्दामा धमाका मच्चायो। शाहरुख(काजोलले दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे, बाजीगर, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, दिलवाले मा काम गरेका छन्। दुबैलाई ठूलो पर्दामा देख्नु प्रशंसकहरुको लागी कुनै उपचार भन्दा कम छैन। तर के तपाईंलाई थाहा छ शाहरुख खान का छोरा अब्राम एक समय मा काजोल लाई मन पराउँदैनथे।
अब्रामलाई काजोल किन मन परेन ?
शाहरुख खानले फिल्म दिलवाले को ट्रेलर लन्च को समयमा यस बारे मा बताए अनुसार उनका छोराले काजोललाई मन पराउँदैनन् । उनलाई काजोलसंगको जोडीका बारेमा अन्तरवार्तामा प्रश्न सोधिएको थियो । तपाईको छोराको के प्रतिकृया छ ? भनेर शाहरुखलाई सोध्दा उनले यस्तो जवाफ दिएका थिए ।
शाहरुखले भनेका थिए कि जब उनी छायाँकनको काम सके त्यसपछि फिल्मका निर्देशक रोहित शेट्टीले शाहरुखका छोरालाई देखाए उनका बुवाले आज के काम गरे ? त्यहाँ एउटा दृश्य थियो जहाँ शाहरुख घाइते थिए। अब्रामलाई लाग्यो कि यो काजोलको कारणले हो।
यसपछि अब्राम काजोलको बारेमा चिन्तित भए। उनले काजोललाई हेरे र भने बुबा घाइते हुनुभएको छ । किन यस्तो गर्नुभयो ? शाहरुख खान भन्छन् ( त्यसैले म उनको बारेमा जान्दछु, की छोरालाई हाम्रो जोडी मन पर्दैन । शाहरुख खानको यो प्यारी कहानी सुनेर अब्राम को पनि बालापनको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अब्राम शाहरुख खानको कान्छा छोरा हुन्।
शाहरुख खान र काजोल पछिल्लो पटक फिल्म दिलवाले मा सँगै देखिएका थिए। फिल्मले राम्रो व्यापार गर्यो। शाहरुख र काजोलको जोडी बिना यो फिल्म हेर्न को लागी खास हुने थिएन। यस फिल्म को गीत धेरै ट्रेन्ड मा थियो। किंग खानको वर्कफ्रन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने, यी दिनहरु उनी फिल्म पठान कोकाममा व्यस्त छन्। दीपिका पादुकोण यसमा उनीसँग काम गर्दैछिन्। दुवैले यस अघि फिल्ममा सँगै काम गरिसकेका छन्। उनीहरुको जोडी पनि धेरै रुचाइएको छ।
Prevमोटरसाइकल र गाडीको ट्रायल दिनेहरुलाई खुसीको खवर, भर्खरै आयो यस्तो सुचना
Nextधेरै समयपछी खोल्नै लागेको विद्यालय नजिकैबाट खोला बग्यो, के हुन्छ बालबालिकाको शिक्षा ?
साइकलमा सुप बेच्ने नेपाली डोलराज १८ वर्षमा १७ रेस्टुरेन्टका मालिक